कोरोनाबाट जोगिने खोप निस्कियो, चीनमा लगाउन शुरु, बच्चाका लागि आमाबुवाहरुले डर मान्नुपर्दैन – Saurahaonline.com
कोरोनाबाट जोगिने खोप निस्कियो, चीनमा लगाउन शुरु, बच्चाका लागि आमाबुवाहरुले डर मान्नुपर्दैन
सौराहा अनलाइन | २०७६, २३ चैत्र आईतवार
काठमाडौं : विश्वलाई सताइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट जोगिने खोप तयार भएको छ । खोप कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनले नै तयार पारेको हो । चीनले लामो प्रयास र परीक्षणपछि कोरोना विरुद्धको खोप बनाउन सफल भएको हाे। चीनमा शनिबारदेखि कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध खोप लगाउन थालिएको जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ । चीनले शनिबार सय जनाभन्दा बढी नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको छ ।
चीनले परिणाम हेरेर तुरुन्तै अर्बौको संख्यामा खोप वितरण गर्ने जनाएको छ । अमेरिका पनि खोपकाे परीक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको बीबीसीले जनाएको छ । बीबीसीका अनुसार सिंगापुर, इजरायल, नेदरल्याण्ड, क्यानाडा, जापान लगायतका देशहरुले खोपको सफलता पाउदैछन् । कोरोना संक्रमण निको गर्ने एन्टी भाइरल औषधि विभिन्न देशका प्रयोगशालामा परीक्षण भइरहेका छन् ।
जापानी इन्फ्लुएन्जा, सार्स, मर्स, स्वाइन फ्लु आदिको महामारीमा सफल सिद्ध भएका औषधिले कोरोना संक्रमणमा उत्साहप्रद रुपमा काम गरिरहेका छन् । यी औषधिबाट लाखौँ व्यक्तिले जीवन पाइरहेका छन् । मलेरिया, बाथ, नाम्ले किरामा प्रयोग हुने औषधिको युरोप, अमेरिका, इरान आदि देशमा ब्यापक प्रयोग गरिएको छ । यी औषधिको सफलता सोंचेभन्दा राम्रो आएको छ । सेकेण्डरी इन्फेक्सन रोक्नको लागि ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिकले प्रभावकारी काम गरिरहेका छन् ।
बेलायतमा ७१ वर्षका राजकुमार चार्ल्सलाई कोरोना संक्रमण भएपछि आयुर्वेदिक रिसोर्टमा उपचार गरेपछि निको भइसकेको छ ‘यसको अर्थ उमेर बढी हुँदैमा निको नहुने होइन’ डा. पाण्डे भन्नुहुन्छ, ‘आयुर्वेद, होमियोप्याथी उपचार पनि कोरोना संक्रमणमा निकै उपयोगी छ । छिमेकी मुलुक भारतले कोरोना संक्रमण २ घन्टामा पत्ता लगाउने किटको आविष्कार गरेर जाँच गर्दैछ । त्यो किट सस्तो एवं भरपर्दो मानिएको छ । यो किट पुनाको माइल्याबमा उत्पादन गरेर बजारमा उपलब्ध गराएको हो ।
नेपालकाे विभिन्न अस्पतालमा आइसीयु, भेन्टिलेटर, आइसोलेसन वार्ड तथा परीक्षणको दायरा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा जनचेतना, इम्युनिटी पावर, घरमै बस्ने परिपाटी आदिले गर्दा अत्यन्तै न्यून संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । ‘यदि नेपालमा कोरोना फैलिएमा चीन, भारत लगायतका देश सहयोग गर्न तम्तयार भएका छन् ’ उहाँ भन्नुहुन्छ, कोरोना संक्रमणबाट बालबालिका तथा युवावर्ग सुरक्षित भएको हुँदा बच्चाका लागि आमाबुवाहरुले डर मान्नुपर्दैन । हामी नेपालीले बिसिजीको खोप लगाएका छौं , समयसमयमा जुकाको औषधि, हात्तीपाइले रोगको औषधि खाएका छौं , जोखिम न्यून छ ।’
तपाईको आजको भाग्यफल ? २०७७, २१ जेष्ठ बुधबार
छुवाछुत मुक्त घोषणामा सिमित, विभेद ज्यूँका त्यूँ २०७७, २० जेष्ठ मंगलवार
लकडाउनले गर्दा चितवनमा साइकल चलाउने बढे २०७७, २० जेष्ठ मंगलवार
रुकुम चौरजहारी प्रकरण : मुख र टाउकोमा कपडाले बाँधेको अवस्थामा बेपत्ता शाहीको शव फेला २०७७, २० जेष्ठ मंगलवार
किन आइन एक्कासी भैरहवा हुँदै नेपाल मनिषा कोइराला ? २०७७, २० जेष्ठ मंगलवार
थप चार जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण २०७७, २० जेष्ठ मंगलवार
छुवाछुत मुक्त घोषणामा सिमित, विभेद ज्यूँका त्यूँ
चितवन : नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालेको एक दशक बढी हुदाँ पनि अवस्था.....
डाेल्पामा भेरीमा बगेर तीन
अहिलेसम्मकै बढी संक्रमित थपिए नेपालमा, आज मात्रै २८८ जनामा कोरोना पुष्टि
माडीमा सुकुमबासीका निर्माणाधीन घरहरु तोडफोड
खगेरी खोलामा डुबेर फेरि एकको मृत्यु
लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माण अन्तिम चरणमा
चितवनका व्यवसायीको एउटै स्वरः लकडाउन थेग्न गाह्रो भो, खर्च धान्न साह्रो भो
गण्डकी प्रदेश : पारो घटेको अर्थतन्त्र…
आम्दानी बढाउन र सुशासन कायम गर्न जुटौं : सापकोटा
प्रदेश ५ मा कोरोना संक्रमितको संख्या ६६८